होटल हिमालयमा सामूहिक सौदावाजी सम्पन्न रु. २५५० बृद्धि अरु सुविधाहरुमा भारीमात्रामा बृद्धि - Majdoor Online
होटल हिमालयमा सामूहिक सौदावाजी सम्पन्न रु. २५५० बृद्धि अरु सुविधाहरुमा भारीमात्रामा बृद्धि
ललितपुर, होटल हिमालय प्रा.लि. प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुः नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन तथा अखिल नेपाल हो.क्या.तथा रे.म.संघ र होेटल व्यवस्थापनबीच २०७४ चैत्र २० गतेका दिन सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सामूहिक सौदावाजी सम्पन्न भएको छ । युनियनले गत ३१ डिसेम्बर, २०१७ मा २४ सूत्रीय मागपत्र प्रस्तुत गरेकोमा सबै जसो माग पूरा भएपछि आधिकारिक युनियन र व्यवस्थापन दुवै हर्षित देखिएका छन् । यो उदाहरण अरु थुप्रै आधिकारिक युनियनहरु र व्यवस्थापनलाई समेत नमूना योग्य देखिएकोले पूरा भएको सहमति पत्र जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) तलबभत्ता वृद्धि ः सबै तहका श्रमिकहरूलाई समान रुपले रु. २,५५० थप गरिएको छ । जसमध्ये बेसिकमा ६०% र भत्तामा ४०% समायोजन गरिने छ ।
२) आधारभूत तलबमा परिमार्जन बारे ः (क) तह आर १ देखि एस— ३ सम्मका स्टाफहरूको आधारभूत (बेसिक) तलबमा परिमार्जन गरी रु. ५० को अन्तर पारी बढीमा रु.३००सम्म वृद्धि गरिएको छ ।
३) भ्रमण भत्ता वृद्धि बारे ः भ्रमण भत्ताको साविक रकम रु. ३,५०० लाई वृद्धि गरी रु. ४,२०० उपलब्ध गराइने छ ।
४) औषधी÷उपचार खर्च बारे ः (क) ड्युटी बाहिर दुर्घटना भएको स्टाफको औषधी उपचार खर्चको सोधभर्ना रकम होटलले ७०% उपलब्ध गराइने छ ।
(ख) परिवारको साधारण उपचारतर्फ दिइँदै आएको रकमलाई वृद्धि गरी रु. १५,०००दिइने छ ।
(ग) अस्पताल भर्ना भएको बिरामीको बेड चार्ज रु. १,२०० दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
(घ) परिवारको बिल पेस नगर्ने स्टाफलाई पुरस्कारस्वरुप साधारण साल तमामीपछि रु ४०००उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ ।
५) काजकिरिया खर्च रकम रु. १८,००० बाट वृद्धि गरी रु. २०,५०० दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६) अनिवार्य अवकाश पाउने स्टाफलाई स्वतः एक ग्रेड वृद्धि र ग्रसमा १ वर्षको तलवको व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बिरामी बिदा, सुत्केरो बिदालाई श्रम ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारअनुसार व्यवस्था भएको छ । दीर्घ सेवा पुरस्कारमा वृद्धि गरिएको छ । स्टाफका छोरा वा छोरीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकास प्राप्त गर्ने स्टाफले होटलमा पु¥याएको सेवाको कदर गर्दै निजको छोरा वा छोरीलाई होटलको नियमभित्र पर्ने गरी रोजगारी दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसैगरी स्टाफको बर्थडेमा २ (दुई) पाउण्डको ब्ल्याकफरेस्ट केकको व्यवस्था गरिएको छ ।
युनियन अफिस कोठा थप गरिएको छ । होटलले स्टाफलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको गाडीको पिकअप ड्रपको व्यवस्थालाई अझ बढी लाभदायी बनाउन केही ठाउँको पिकअप÷ड्रप प्वाइन्टको दूरी बढाइएको छ ।
उपर्युक्त बँुदाहरुलगायत अन्य केही सेवा, सुविधाहरु पनि वृद्धि गरी वाम गठवन्धनको आधिकारिक युनियनले यो पटक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ ।
आधिकारिक युनियनको वार्ता समितिको नेतृत्व बसन्त नेपाल, ऋषिराम भण्डारी, सागर ‘मणि’ थापा, विकास विष्ट, रामकाजी अधिकारी, केशव कुँवर निशा मोक्तान,चन्द्र श्रेष्ठ, केशव नकर्मी, निरोज घिमिरे र अन्जू के.सी.ले गरेका थिए भने व्यवस्थापनको तर्फबाट लामो अनुभवबाट प्रशिक्षित व्यवस्थापकहरु: प्रल्हादराज कँुवर—चिफ अपरेटिङ अफिसर÷महाप्रवन्धक,श्रवण ताम्राकार— कर्पोरेट डाइरेक्टर÷ग्रुप फाइनान्स कन्ट्रोलर, रविन्द्र तण्डुकार— एक्जुक्युटिभ म्यानेजर, विष्णुकुमार श्रेष्ठ— मानवसंसाधन प्रवन्धक, सुरेस महर्जन— उप—वित्त नियन्त्रक र केदारबहादुर थापा— सहायक मानव संसाधन प्रवन्धकको सहभागिता रहेको थियो ।
Previous: मई दिवसको मुखैमा अन्टुफले श्रममन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै
Next: राष्ट्रपति निर्वाचनमा उठ्न नदिन षडयन्त्रपूर्वक लुलालाई १२ बर्षको जेल सजाय